यी चार खराब बानीहरुले समय अगावै निम्त्याउँछ बुढेसकाल !! | सुदुरपश्चिम खबर
मानिसहरू उमेर पुगिसक्दा पनि बुढेसकालले नछोओस् भन्ने सोच्छन् । चाउरिएका छाला कसैलाई मन पर्दैन । झनै उमेरै नपुगि बुढेसकाल लाग्यो भने हरकोहीमा खिन्नता छाउनु स्वभाविक हो ।
यदि समय अगावै बुढेकालको लक्षण नदेखियोस् भन्ने हो भने हामीले आफ्नो जीवनशैली तथा खानपानमा सुधार ल्याउनु आवश्वयक छ । हाम्रो जीवनशैलीले नै निर्धारण गर्छ आयु र बुढ्यौली !
यी बानी परिवर्तन गरे हुन सक्छ समस्या समाधान
जंक फूड वा कोल्ड ड्रिङ्क : जंक फूडमा धेरै नै ट्रान्स फ्याट, नुन र चिनी हुन्छ । यसमा पोषक तत्व शून्य बराबर हुन्छ । जंक फूडले शरीरबाट कोलोजनको मात्रा कम गर्छ । कोलेजनले अनुहारमा चाउरी पर्नबाट रोक्छ । यस्तै सोडा र कोल्ड ड्रिङ्क्सले पनि अनुहारमा चाउरी पर्न सघाउ पुर्याउँछ ।
रक्सीको अत्यधिक सेवनः केही अनुसन्धानका अनुसार जो मानिसहरु रक्सीको अत्यधिक सेवन गर्छन्, उनीहरुमा बुढेसकालको लक्षण चाँडै नै आउने गर्छ । रक्सीको अत्यधिक सेवनले आँखा मुनी कालो दाग, अनुहारमा चाउरी र डिहाइड्रेशन हुने गर्छ ।
घोप्टो परेर सुत्नुः सुत्दा शरीरले ऊर्जा प्राप्त गर्छ तर यदि तपाईं घोप्टो परेर सुत्नुहुन्छ भने तपाईंमा बुढेसकालको लक्षण चाँडै नै आउन सक्छ । एस्थेटिक सर्जरी जर्नलमा छापिएको एक अनुसन्धानका अनुसार घोप्टो परेर सुत्दा अनुहारमा सिधा दबाब पर्छ जसका कारण चाउरी पर्न थाल्छ । त्यसैले तपाईंले आफ्नो सुत्ने तरिकामा परिवर्तन गर्नुपर्छ ।
निद्रा अपुग हुँदाः निद्रा पूरा नहुँदा पनि अनुहारमा चाँडै नै चाउरी पर्न थाल्छ । निद्रा पूरा नहुँदा पूरा रुटिन बिग्रने गर्छ । यसको असर शरीरमा पनि पर्छ । युनिभर्सिटी हस्पिटल केस मेडिकल सेन्टरको एक शोधमा निद्रा पूरा नहुनेहरुको अनुहारमा अत्यधिक चाउरी देखिएको पत्ता लागेको छ । साथै यसको एक प्रमुख कारण तनाव पनि मानिएको छ । (मकालु खबर बाट सभार)